16 Sano wax soo dhiganayey Ma waxay I Dhaxalsiisey In Shirkada SBI Igu Takoorto Naafonimadeyda - Guuguule News Network
Shirkad SBI (Somaliland Beverage industry) oo ah shirkada soo saarta shaaabada Coca-cola company oo ay leeyihiin muwadiniin reer Somaliland kana shaqeyaan dad badan oo reer Somaliland ahi.
Lana odhankaro waa Companay ugu waaweyn Dalka laguna .
Maal-geliyey in kabadan 1 7 milion waana washada keliya manta wadanka kajirta e kubixisay lacag inta leeg, waana ku hambalyeynaya lakiin se waxa meel lagagadhacay dadka ay laxadkooda waxa ka maqan yihiin iyagaoo aan kulahayn hal qof Oo shaqaale ah loona ogolay in iney kashaqeeyan dadka naafada ahi.
Anigana waxa igala kulmey dhacdo xanuun badan oo aanan is lahayn adigoo wadankaaga jooga ayey kugu dhacaysa.
Markan uu shaqo doonto waxay ahayd 2015 kii ilaa 2018 waa layso celcelinayey naafonimada waxa la eegaya physical appearance lamana eego Diintiisa, Aqoontiisa, Akhlaqdiisa iyo kartidiisa se ta bedelkeedu waa disability ma yahay ha ama maya.
Sida igu dhacdey aniga oo ah AbdirahmanAdem Ahmed.
Muwadin reer Somaliland ah naafo ka ah Adin wallow aanan wax badan qabin horena uso shaqeeyey naafo nimadeyduna iga hor istaageyn shaqada hadana waxa SBI iigala kulmay arin cajiib ah oo aanan filanayn inay igu dhici doonto.
Shaqaan u doontay SBI 3 sano ka hor waxan u geeyey CV ga HR SBI Mohamed ismail oo sifiicana ii garanaay waxay ahayd 07-8-2015 kii.
Sida caadiga ah qofka naada ahi waxa uu kala siman yahay qofka caadiga ah shaqalaysiinta iyo xuquuqda shakhsi ahaneed sida Shaqo, wabarasho iyo caafimaad intaba binaadamku way kasimanyihiin.
Mudada 3 sano ah waan kuso noqnoqonaaye bilkasta xafiiska HR isagoo kolba I leh I yarasug waan kuugu horeysiinaya weli may so bixin shaqo iwm.
Markhaatina waxa ka ah shaqaalaha SBI xafiiska HQ e u dhaw biriishaka weyn ee Hargeisa markii wakhti badan oo aan shaqo kuraadsan lahaa igaga lumay
Maalin dhaweyd ii cadeeyey sababta uu igu hortaagan yahay inay tahay naafonimada oo hadii uu I shaqaalaysiyo ay imanayaan HR Cocacola ah isagana shaqada lagaga eryaayo loona baahnayn qof uu laxaadkisa wax ka dhiman yahay isagana shaqada lagaga Eryaayo
Runtii isma idhaahdo waxaad tahay naafo niyadana maan gelinin inaan naafonimada shaqo ku waayayo waxna maan soo barteen hadaan sidan filanaayo walaahi.
Maalinti sida laygu yidhi anoo wakhti badani igaga lumay sugitaanki Ayaan ogaadey in Tacadi badani wadanka ka jiro oo lagu Takooro dadka naafada ah.
Waxaan ka Cadsanaya shirkadaha wadanka inay ka qayb geliyaan shaqalaysiinta dadka naafada ah si gaarana waxan uga Codsanaya Premier bank Somaliland oo runtii u dabecsan dadka naafada ah inay wax igala qabtaan shaqalaysiinta
Maant dadkii naafada aha ee wax Bartay ma haystaan shaqo ay kala simanyihiin dadka caadiga ah kol hadii shirkadihi ugu waaweyna sida ula dhaqmayaan uguna takoorayaan naafonimaada illahay ku keenay.
Taasi waaniyad jab iyo mustaqbal xumaan hortaagan dadka laxaadkoda wax Kamaqanyahy.
Diinteena islamka iyo xuquuqda Adamiga meelna kagama jirto in qofka naafonimadiisa lagu wax Yeeleeyo iyadoo la ilaalinayo qalbigiigsa, cirdigiisa iyo sharatiisaba si aanay kuwa kadanbeya u niyadjabin.
Qore: EngAbdirahma nAdem Ahmed